Iindawo ezingcono kakhulu zedolophu enkulu yehlabathi kubakhenkethi base-US
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindawo ezingcono kakhulu zedolophu enkulu yehlabathi kubakhenkethi base-US
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba zeBahrain Breaking • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo • Iindaba zeKuwait Breaking • Iindaba zeMalta Breaking • Iindaba eziPhezulu zeOman • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • komzila Ngoku • Iindaba zaseTurkey zokuPhula • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
Eyona ndawo ikwindawo yokuhlala isixeko esikhulu kubakhenkethi baseMelika.
Ukuchonga ezona zihloko zilungileyo zokundwendwela eholideyini, iingcali zohambo ziye zahlalutya iingqukuva eziphuhlileyo ezingama-69 kuluhlu lwezinto kubandakanya indleko zeehotele kunye nezothutho, uqikelelo lwemozulu olumyinge, kunye nenani lezinto ezinomtsalane kunye neeresityu
I-Ankara, iTurkey sesona sixeko silikhulu samaxabiso ehotele, ngexabiso eliphakathi le- $ 45.74 ngobusuku.
ILuxembourg inezithuthi zikawonke-wonke zasimahla kwaye sesona sixeko silikomkhulu sothutho kwihlabathi.
IValletta, iMalta sesona sixeko sikhulu somtsalane (311 nge-KM nge-sq) kunye neeresityu (i-442.6 KM ngesikwere).
Njengobusika busondela, izixeko zezona ndawo zifanelekileyo zokuya eholideyini, zizaliswe ngamaqashiso ukwenza nantoni na enemozulu.
Kwaye ngabahambi abanethemba lokubaleka i-USA ngoku, ngokuthintelwa kokuhamba kususwe, iidolophu ezinkulu kwihlabathi liphela zibonelela ngendawo efanelekileyo yeholide.
Kodwa zeziphi izixeko ezikhulu ezibalaseleyo kubakhenkethi?
Ukufumanisa ukuba zeziphi ezona ndawo zingcono zokundwendwela eholideyini, iingcali zokuhamba ziye zahlalutya iingqukuva eziphuhlileyo ezingama-69 kuluhlu lwezinto kubandakanya indleko zeehotele kunye nezothutho, uqikelelo lwemozulu olulinganiselweyo, kunye nenani lezinto ezinomtsalane kunye neeresityu.
Ezona zixeko ziphambili ziphambili kubakhenkethi kwihlabathi liphela
Uhlu Isixeko esikhulu ilizwe Ixabiso eliphakathi lehotele ($) Umndilili weNdlela enye yamaTikiti kuThutho loLuntu lwaseKhaya ($) Umndilili weTemp (degrees c) Umyinge wemvula yonyaka (mm) Inani lezinto ezinomdla Inani leeresityu Amanqaku onke
2 Abu Dhabi IUnited Arab Emirates $158.69 $0.55 27.92 42 591 2,778 6.24
3 New Delhi Indiya $101.87 $0.40 25.00 700 2,875 12,409 6.06
4 Manama Bhareyini $180.87 $0.80 26.50 68 120 694 5.77
5 Riyadh ISaudi Arabia $169.78 $0.87 26.00 66 218 1,289 5.74
7 Paris Fransi $193.34 $2.26 12.30 720 7,797 17,448 5.57
8 Sixeko saseKwait Khuweyithi $180.87 $0.85 25.70 128 423 1,144 5.56
9 Ankara ikarikuni $45.74 $0.42 12.00 451 532 3,888 5.53
10 Jakarta Indoneshiya $81.77 $0.28 26.70 2,097 793 8,958 5.48
IValetta, iMalta ityhilwe njengeyona dolophu ilungileyo kwihlabathi inamanqaku apheleleyo ayi-6.74 kwali-10, nelona nani liphezulu lezinto ezinomtsalane kunye neeresityu kuzo zonke izixeko ezikhulu.
I-Abu Dhabi, ikomkhulu le-UAE, ikwindawo yesibini ngamanqaku ayi-6.24 kwayi-10. Umndilili wamaqondo obushushu esixekweni afike kwiidigri ezingama-27.92 kwaye umyinge wemvula uyi-42mm ngonyaka, okwenza oku kubeyindawo entle ukuba ufuna ilanga.
INew Delhi, eIndiya ikwindawo yesithathu ngamanqaku aphakathi ayi-6.06 kwali-10, ngamaqondo aphakathi aphakathi ukuya kuma-25 degrees nakuma-12,409 XNUMX eeresityu zokukhetha.
I-Bangkok, iThailand yeyona dolophu iphambili kubushushu nge-avareji yeedigri ezingama-26.6.
ICairo, i-Egypt inemvula encinci ene-18mm kuphela yemvula emiselweyo ngonyaka.